1 KỌRINT 10 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (1KỌR 10)
10:1 10:2 10:3 10:4 10:5 10:6 10:7 10:8 10:9 10:10 10:11 10:12 10:13 10:14 10:15 10:16 10:17 10:18 10:19 10:20 10:21 10:22 10:23 10:24 10:25 10:26 10:27 10:28 10:29 10:30 10:31 10:32 10:33
1 KỌRINT 10
Ụmụnna m, ka anyị hapụ ichefu ihe mere nna nna anyị ha mgbe ha jere ije nꞌime ọzara. Chineke ji igwe ojii duo ha. O mekwara ka ha si nꞌetiti osimiri uhie gafee.
A pụrụ ịsị na ọ bụ nꞌime igwe ojii ahụ na mmiri ahụ ha gafere ka e mere ha baptizim, nke mere ha ndị na-eso ụzọ Mosisi.
Ha nile rikwara ihe oriri nke mmụọ ahụ Chineke zitere.
Ha ṅụkwara mmiri nke mmụọ ahụ, mmiri sitere nꞌoke nkume nke mmụọ ahụ, nke na-eso ha. Oke nkume ahụ bụ Kraịst nꞌonwe ya.
Ma mgbe Chineke mechaara ha ihe ndị a nile, ha nupụrụ isi nꞌebe Chineke nọ. Ọ bụ nnupụ isi a mere Chineke ji laa ha nꞌiyi nꞌime ọzara ahụ.
Ihe dakwasịrị ha bụ ihe ịma atụ dịịrị anyị. Ọ bụkwa ihe ịdọ aka na ntị nye anyị, ka anyị hapụ ịbụ ndị agụụ ime ihe ọjọọ na-agụ dị ka ha.
Ka anyị hapụkwa ịbụ ndị na-ekpere arụsị dị ka ụfọdụ ha mere. Akwụkwọ nsọ kwuru sị, “Ụmụ Izirel nọdụrụ ala na-eri na-aṅụ, ha bilikwara ọtọ ite egwu nꞌihu ehi ahụ e ji ọlaedo kpụọ.”
Ihe mmụta ọzọ dịrị anyị bụ ihe dakwasịrị ha mgbe ụfọdụ nꞌime ha mere mmehie ịkwa iko. Ọ bụ iri puku mmadụ abụọ na atọ nꞌime ha nwụrụ nꞌotu ụbọchị ahụ.
Ka anyị hapụ ịnwa Chineke ọnwụnwa dị ka ụfọdụ nꞌime ha si nwaa Chineke. E mere ka agwọ tagbusie ha. Ka anyị hapụkwa ịtamụ dị ka ụfọdụ ha tamụrụ megide Chineke. Chineke zitere mmụọ ozi ya ka o gbuo ha.
Ihe ndị a nile dakwasịrị ha ka ọ bụrụ ihe ilere anya nye anyị, ka ọ bụrụkwa ihe ịdọ aka na ntị nye anyị. Ka anyị hapụ ime ihe ndị a ha mere. E dekwara ihe dakwasịrị ha nꞌakwụkwọ ka anyị bụ ndị bi nꞌoge a ọgwụgwụ ụwa dị nso, site na ha mụta ihe.
Bikonụ ụmụnna m, gbaaranụ ife arụsị ọ bụla ọsọ.
Dị ka ndị nwere uche nke unu bụ, leenụ ihe ndị a anya matakwanụ ma ọ bụ eziokwu ka m na-ekwu.
Nꞌoge oriri nsọ, mgbe anyị na-arịọ Chineke ka ọ gọzie iko mmanya ahụ tupuu anyị aṅụọ ya, o gosighị na anyị ndị na-aṅụ ihe dị nꞌiko a kwere na ọ bụ ngọzi si nꞌọbara Kraịst ka anyị na-eketa? Mgbe anyị na-ata beredi anyị nyawara, ọ bụkwaghị uru nke ahụ Kraịst na-eweta ka anyị na-eketa?
Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, ma ọ bụ otu ogbe beredi ahụ ka anyị na-ata. Nke a na-egosi na anyị nile bụ akụkụ ahụ nke otu anụ ahụ Kraịst, onye bụ beredi ahụ.
Otu a kwa ka ọ dị nꞌetiti ndị Juu. Ndị nile soro rie ihe e ji chụọ aja, bụ ndị e jikọtara nꞌotu site nꞌoriri ahụ.
Gịnị ka okwu ndị a m na-ekwu pụtara? Ọ̀ bụ na arụsị ahụ ndị na-ekpere arụsị na-achụrụ aja bụ Chineke nꞌezie? Ka m na-ekwu na aja ha chụrụ bara uru ọ bụla? Tụfịakwa, nke a abụghị ihe m na-ekwu.
Nꞌihi na mmadụ enweghị ike isoro rie oriri nsọ, sorokwa rie nri ekwensu.
Gịnị ka unu na-achọ ime? Ọ̀ bụ ime ka iwe wee Chineke? Unu dị ike karịa ya?
Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ime ihe nile, dị ka iri nri e ji chụọra arụsị aja, ma ọ bụghị ihe nile dị mma omume. Anyị nwekwara ike ime ihe nile, ma ọ bụghị ihe nile nwere ike inyere anyị aka.
Ka anyị hapụ ịchọ ọdịmma nke anyị nanị, kama anyị ga na-achọ ọdịmma nke ndị ọzọ, ime ihe ga-enyere ha aka.
Nke a bụ ihe i kwesịrị ime. Ọ bụrụ na ị gaa ahịa, zụrụ ụdị anụ ọ bụla ị chọrọ nke a na-ere nꞌahịa, ajụla ajụjụ ọ bụla ịmata ma e ji ya chụọra arụsị aja ma ọ dịghị, nꞌihi na ọsịsa ị ga-anata pụrụ iwute mmụọ gị.
Ọ bụrụ na onye na-ekweghị ekwe akpọọ gị, sị gị bịa nꞌụlọ ya, gaa, riekwa nri ọ bụla e nyere gị na-ajụghị ajụjụ. Nꞌihi na ọsịsa ya pụrụ imerụ mmụọ gị.
Ma ọ bụrụ na e nwee onye gwara gị sị, “E jikwa anụ a chụọra arụsị aja” erila ya, nꞌihi nwoke ahụ gwara gị na e ji ya chụọ aja, na nꞌihi na ọ ga-ewute mmụọ ya ma i rie ya.
Nꞌoge a ihe dị mkpa abụghị ihe i chere banyere anụ ahụ, kama ihe dị mkpa bụ ime ka mmụọ nwoke ahụ gwara gị na e ji ya chụọra arụsị aja hapụ ịda mba. I nwere ike ịjụ ajụjụ sị, “Gịnị mere m ga-eji hapụ ime ihe ọ bụla nꞌihi na ọ ga-ewute mmụọ onye ọzọ?
Ọ bụrụ na m nwere ike kelee Chineke ekele nꞌihi ya, were nri m rie, olee otu o si gbasa onye bịara ịjụ m ọnụ?”
Ka m gwa gị ihe mere o ji dị mkpa. I kwesịrị ime ihe ọ bụla ị na-eme, ma ọ bụ iri nri ma ọ bụ ịṅụ ihe ọṅụṅụ, i kwesịrị ime ihe nile nꞌụzọ ọ ga-esi wetara Chineke otuto.
Ya mere, ekwela ka ị bụrụ ihe ịsụ ngọngọ nye onye ọ bụla ma ọ bụ onye Juu, ma ọ bụ onye mba ọzọ, ma ọ bụkwanụ nzukọ Chineke.
Na-agbalịsinụ ike ime dị ka m si eme. Nꞌihe ọ ọ bụla m na-eme ana m ejisi ike ime ihe ga-atọ onye ọ bụla ụtọ. Anaghị m achọ ọdịmma nke m nanị, kama ọ bụ ọdịmma nke mmadụ ibe m, ime ka a zọpụta ha.
1 KỌRINT 10:1
1 KỌRINT 10:2
1 KỌRINT 10:3
1 KỌRINT 10:4
1 KỌRINT 10:5
1 KỌRINT 10:6
1 KỌRINT 10:7
1 KỌRINT 10:8
1 KỌRINT 10:9
1 KỌRINT 10:10
1 KỌRINT 10:11
1 KỌRINT 10:14
1 KỌRINT 10:15
1 KỌRINT 10:16
1 KỌRINT 10:17
1 KỌRINT 10:18
1 KỌRINT 10:19
1 KỌRINT 10:21
1 KỌRINT 10:22
1 KỌRINT 10:23
1 KỌRINT 10:24
1 KỌRINT 10:25
1 KỌRINT 10:27
1 KỌRINT 10:28
1 KỌRINT 10:29
1 KỌRINT 10:30
1 KỌRINT 10:31
1 KỌRINT 10:32
1 KỌRINT 10:33
1 KỌRINT 1 / 1KỌR 1
1 KỌRINT 2 / 1KỌR 2
1 KỌRINT 3 / 1KỌR 3
1 KỌRINT 4 / 1KỌR 4
1 KỌRINT 5 / 1KỌR 5
1 KỌRINT 6 / 1KỌR 6
1 KỌRINT 7 / 1KỌR 7
1 KỌRINT 8 / 1KỌR 8
1 KỌRINT 9 / 1KỌR 9
1 KỌRINT 10 / 1KỌR 10
1 KỌRINT 11 / 1KỌR 11
1 KỌRINT 12 / 1KỌR 12
1 KỌRINT 13 / 1KỌR 13
1 KỌRINT 14 / 1KỌR 14
1 KỌRINT 15 / 1KỌR 15
1 KỌRINT 16 / 1KỌR 16